वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. ५ अर्बले बढ्दा कस्तो छ कर्जा लगानीको अवस्था ? Bizshala -
काठमाण्डौ । पछिल्लो एक साताको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप बढेको छ भने कर्जा लगानी घटेको छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) को तथ्यांकअनुसार वैशाख १७ गतेदेखि वैशाख २३ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। योसँगै वैशाख २३ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वैशाख १६ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
यसैगरी यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको एनबीएले जनाएको छ। गत वैशाख १६ गतेसम्म बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा वैशाख २३ गतेसम्म घटेर ४१ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ।
यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ९०.८१ प्रतिशत रहेको छ।